Qurba Joog Booqatay Gobolka Doolo. - Cakaara News
Qurba Joog Booqatay Gobolka Doolo.
Wardheer(cakaaranews) talaado. 2da August, 2016. Qurba joogta ka soo jeeda DDSI ee ka soo qaybgashay kulan waynihii todobaadka qurba joogta DDSI ayaa markii la soo gabagabeeyay kulanwaynihii waxay booqasho ugu kala baxeen gobolada iyo degmooyinka deegaanka. kuwaasi oo maalmahan booqanayey mashaariicaha waawayn ee laga hirgaliyay deegaanka.
Hadda wafti qurba joog ah, oo ka soo jeeda DDSI gaar ahaan gobolada qoraxay iyo Doolo oo ay hogaaminaysay wasiirka haweenka iyo caruurta DDSI marwo Raxma Suldaan Maxamuud Haybe oo booqasho ku maray qaarka mid ah degmooyinka gobolka qoraxay islamarkaana soo indha indheeyay marshaariicaha horumarineed ee laga hirgaliyay degmooyinka Gobolka Qoraxay ayaa gaadhay Gobolka Doolo.
Waftigan ayaa markii ay gaadheen gobolka doolo siwayn loogu soo dhaweeyay degmada wardheer ee xarunta gobolka doolo halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen masuuliyiinta gobolka oo uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Doolo mudane Maxamuud Cali Axmed , kuwa degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
Waftigan qurba joogta oo kulamo la yeeshay bulshada ku dhaqan degmada wardheer ayaa kulankaasi ka dib u anbabaxay degmooyinka la helow yucub, Daraatoole iyo degmada Danood. Waxaana hor kacayey wasiirka haweenka caruurta iyo dhalinyarada DDSI marwo raxma suldaan maxamuud haybe, iyo gudoomiyaha gobolka doolo mudane maxamuud cali axmed. Waxayn booqdeen dhamaan mashaariicaha horumarineed ee laga hirgaliyay degmooyinkaasi
qurba joogtan ayaa siwayn ugu bogay horumarka balaadhan iyo xasiloonida taamka ah ee ka hirgalay deegaanka waxayne sheegeen in ay soo arkeen mashaariico waawayn gashi u noqday bulshada deegaanka. waxayna qurba joogtani siwayn ugu mahad celiyeen xukuumada DDSI ee dadaalka dheer u gashay hirgalinta horumarka iyo xasiloonida deegaanka iyo waliba bulshada deegaanka ee sida balaadhan uga qayb qaadanaysa dhankooda hirgalinta qorshayaasi.